Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Abakhenkethi batyelele iHawaii ngobuninzi kodwa bachitha imali encinci
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • HITA • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Agasti 30, 2021
7 imiz efundwayo
Umgca omde weeudon noodles eWaikiki
Ngaphandle kwento yokuba uninzi lwabakhenkethi lusagxalathelana ukuya kwiziqithi zaseHawaii, beza nemali encinci ezipokothweni kunye nokunciphisa inkcitho yabo ngelixa baseholideyini. Kungenxa yeso sizathu le nto imigca eya kwiindawo ezingabizi maliba ze-noodle kunye nakwiivenkile ezilula zinde kunokuba kunjalo kwiindawo ezifana neCheesecake Factory. Ukuchitha imali ngoJulayi 2021 kwehle phantse nge-7% ukusuka kumanqanaba angaphambi kwe-COVID-19 ngoJulayi 2019.
Ngaphambi kwe-COVID-19, iHawaii yafumana inkcitho yenqanaba labakhenkethi kunye nokufika kwi2019 nakwiinyanga ezimbini zokuqala zika-2020.
NgoJulayi 2019, inkcitho yabatyeleli yehle yaya kuthi ga kwi-US $ 1.7 yezigidigidi, ukwehla nge-6.8%.
NgoJulayi ka-2020, kwakungekho manani afumanekayo kwinkcitho yeendwendwe kuba kungekho saveyi yokuhamba yayiqhutywa ngenxa yezithintelo ze-COVID-19.
"Ukuba singabamba kwaye silawule ngokukuko ukusasazeka kwe-Delta eyahlukileyo kwaye inefuthe elibi kwiinkqubo zethu zokhathalelo lwempilo, ngokuqinisekileyo sinokulindela ukuhamba, kubandakanya nokuhamba kwamazwe aphesheya, ukuqala ukubuya ngamandla phakathi ku-Novemba kwaye kuqhubeke nokukhula ixesha lokuhamba ngeholide ngoDisemba ka-2021 ukuya kuJanuwari, ngoFebruwari nango-Matshi ka-2022, ”utshilo uMike McCartney, uMlawuli weSebe lezoShishino, uPhuhliso lwezoQoqosho noKhenketho (i-DBEDT) kunye noMongameli odlulileyo kunye ne-CEO ye-Hawaii Tourism Authority (HTA).
Ngokwenkcukacha-manani zokuqala zabatyeleli ezikhutshwe liSebe lezoShishino, uPhuhliso lwezoQoqosho noKhenketho (DBEDT) iyonke inkcitho ngabatyeleli Ukufika ngoJulayi ka-2021 kwakuyi-1.58 yezigidigidi zeedola.
Phambi kobhubhane we-COVID-19 wehlabathi kunye Imfuno yokuvalelwa yedwa eHawaii kubahambi, Iziqithi zaseHawaii zifumene inkcitho yokufika kwabakhenkethi kunye nokufika kwi2019 nakwiinyanga ezimbini zokuqala zonyaka ka-2020. Uthelekiso, uJulayi 2020 ubalo lwenkcitho yeendwendwe alufumanekanga njengoko kwakungekho Saveyi yokuShiya phakathi kuka-Epreli ukuya ku-Okthobha 2020 ngenxa ye-COVID-19 izithintelo. Inkcitho yabatyeleli yehle xa kuthelekiswa ne- $ 1.70 yezigidigidi (-6.8%) ngoJulayi 2019.
“Uqoqosho lwaseHawaii lwalusendleleni ecacileyo yokubuyela kwimeko yesiqhelo kwaye lwaluza kukhula ngamandla kwinyanga ezisixhenxe zokuqala zika-2021. Sifumene inkcitho eyomeleleyo kunye nokufika ngoJulayi ukusuka kwimakethi yase-US edlula amanqanaba e-2019 ngama-29 eepesenti (+ $ 339.3 yezigidi) kwinkcitho kunye neepesenti ezingama-21 (+ 145,267) yokufika. Undwendwe lwaseHawaii lwaseMelika luchitha malunga ne-113 leedola ngomntu ngamnye kuhambo ngalunye ngo-2021, ”utshilo uMcCartney.
“La manani arekhodiweyo ancediswa kukonyusa ibango labathengi, ukubonelela ngenqwelomoya, ukhetho olunqongopheleyo kukhenketho lwamazwe ehlabathi kunye nokungena kwemali yovuselelo. Izinga lokubuyiswa kwakhona ngoJulayi lalingama-88 eepesenti ngokufika kwabantu abambalwa kakhulu (ipesenti ezimbini), utshilo.
Bebonke abatyeleli abangama-879,551 bafika ngenkonzo yomoya kwiiHawaii Islands ngoJulayi 2021, ikakhulu bevela e-US West nase-US East. Ngama-22,562 kuphela abatyeleli (+ 3,798.4%) abafike ngomoya ngoJulayi 2020. Ukufika kweendwendwe ngoJulayi 2021 kuye kwehla ukusuka kubalo lukaJulayi 2019 lwabatyeleli abangama-995,210 (-11.6%).
Ngexesha lika-Julayi ka-2021, uninzi lwabakhweli befika bevela ngaphandle-kurhulumente kwaye behamba phakathi-kwisithili banokudlula kuRhulumente onyanzelekileyo iintsuku ezili-10 zokuzibeka yedwa ngesiphumo esibi se-COVID-19 NAAT esiphumo esivela kwiQabane loVavanyo oluThenjiweyo ngaphambi kokumka kwabo baye eHawaii. ngenkqubo yokuHamba ngokukhuselekileyo. Ukongeza, abantu abagonywe ngokupheleleyo eUnited States banokugqitha kumyalelo wokuvalelwa bodwa ukuqala ngoJulayi 8. Amaziko aseMelika okuLawula nokuThintela izifo (CDC) anyanzelise izithintelo kwiinqanawa zokuhamba ngenqanawa ngokusebenzisa "uMyalelo weSeyile onemiQathango", indlela enezigaba yokuqalisa kwakhona kokuhamba ngenqanawa yabakhweli ukunciphisa umngcipheko wokusasaza i-COVID-19 ebhodini.
I-avareji yobalo lwemihla ngemihla yayiziindwendwe ezingama-265,392 ngoJulayi 2021, xa kuthelekiswa ne-17,970 ngoJulayi 2020, xa kuthelekiswa nama-286,419 ngoJulayi 2019.
NgoJulayi 2021, iindwendwe ezingama-578,629 zafika zivela e-US West, ngaphezulu kwe-12,890 yeendwendwe (+ 4,388.9%) ngoJulayi 2020 kwaye idlula ukubala kukaJulayi 2019 kweendwendwe ezingama-462,676 (+ 25.1%). Iindwendwe zaseMelika zaseNtshona zichithe izigidi ezingama-961.0 zeedola ngoJulayi 2021, ezigqithe kwi-669.8 yezigidi zeedola (+ 43.5%) ezichithwe ngoJulayi 2019. Inkcitho ephezulu yemihla ngemihla yokundwendwela ($ 186 ngomntu ngamnye, + 12.4%) kunye nobude obude bokuhlala (iintsuku eziyi-8.95, + 2.1%) ikwanamagalelo kuhlumo kwinkcitho yabatyeleli baseMelika West xa kuthelekiswa ne-2019.
Kwakukho iindwendwe ezingama-272,821 ezivela e-US East ngoJulayi 2021, xa kuthelekiswa neendwendwe ezingama-7,516 (+ 3,530.0%) ngoJulayi 2020, kunye nabakhenkethi abangama-243,498 (+ 12.0%) ngoJulayi 2019. Iindwendwe zase-US East zachitha i-558.8 yezigidi zeedola ngoJulayi 2021 xa kuthelekiswa ne- $ 510.7 yezigidi (+ 9.4%) ngoJulayi 2019. Ixesha elide lokuhlala (iintsuku eziyi-9.94, + 2.6%) nalo libe negalelo ekunyukeni kwenkcitho yabatyeleli base-US East. Inkcitho yemihla ngemihla ($ 206 ngomntu ngamnye) yayisezantsi xa kuthelekiswa noJulayi 2019 ($ 216 ngomntu ngamnye).
Kwakukho iindwendwe ezingama-2,817 ezisuka eJapan ngoJulayi wama-2021, xa kuthelekiswa nabakhenkethi abangama-54 (+ 5,162.0%) ngoJulayi 2020, xa kuthelekiswa nabatyeleli abayi-134,587 (-97.9%) ngoJulayi 2019. Abatyeleli abavela eJapan bachitha i-11.2 yezigidi zeedola ngoJulayi ka-2021 xa kuthelekiswa ne- $ 186.5 yezigidi (- 94.0%) ngoJulayi 2019.
NgoJulayi 2021, iindwendwe ezili-1,999 zafika zivela eCanada, xa kuthelekiswa nabakhenkethi abangama-94 (+ 2,018.9%) ngoJulayi 2020, xa kuthelekiswa nabatyeleli abangama-26,939 (-92.6%) ngoJulayi 2019. Abatyeleli abavela eCanada bachitha i-5.5 yezigidi zeedola ngoJulayi 2021 xa kuthelekiswa ne- $ 50.1 yezigidi (- 88.9%) ngoJulayi 2019.
Kwakukho iindwendwe ezingama-23,285 ezivela kuwo onke amanye amaMakethi aMazwe ngaMazwe ngoJulayi 2021. Ezi ndwendwe zazivela eGuam, e-Asia, eYurophu, eLatin America, e-Oceania, kwiiPhilippines nakwiiPacific Islands. Xa kuthelekiswa, bekukho iindwendwe ezingama-2,008 (+ 1.059.5%) ezivela kuwo onke amanye amaMakethi aMazwe ngaMazwe ngoJulayi 2020, xa kuthelekiswa neendwendwe eziyi-127,510 (-81.7%) ngoJulayi 2019.
NgoJulayi 2021, zizonke iinqwelo-moya ezihamba ngePacific eziyi-6,275 kunye nezihlalo ezili-1,292,738 zakhonza iziQithi zeHawaii, xa kuthelekiswa neenqwelomoya ezingama-741 kunye nezihlalo ezili-162,130 ngoJulayi 2020, xa kuthelekiswa neenqwelomoya eziyi-5,681 kunye nezihlalo ezili-1,254,165 ngoJulayi 2019.
Unyaka ukuza kuthi ga ngo-2021
Ngeenyanga ezisixhenxe zokuqala zika-2021, inkcitho epheleleyo yabatyeleli yayiyi- $ 6.60 yezigidigidi. Oku kumele ukwehla kweepesenti ezingama-37.5 ukusuka kwi-10.55 yezigidigidi zeedola ezichithwe kwiinyanga ezisixhenxe zokuqala ze-2019.
Bebonke abatyeleli abangama-3,631,400 bafika kwiinyanga ezisixhenxe zokuqala zika-2021, ukwanda ngama-66.7 epesenti ukusukela kunyaka ophelileyo. Ukufika okupheleleyo bekuyiipesenti ezingama-41.1 ezisezantsi xa kuthelekiswa neendwendwe ezingama-6,166,392 kwiinyanga ezisixhenxe zokuqala zika-2019.
“Njengokuba sigqiba ixesha eliphezulu lasehlotyeni kwaye singena kwixesha lokuwa elicothayo siza kufumana ukwehla kwendalo kwabo bafika bevela kwimakethi yase-US ngeli xesha lamagxa emveli. Ngeli xesha, akukho nto intsha singena kuyo eqikelelweyo yamazwe aphesheya, ke kulindeleke ukuba icothe kunesiqhelo kwintengiso iyonke. Imarike ikwalindeleke ukuba ithambe njengoko sibona ukwehla kwinqanaba lokubhukisha elizayo ngenxa yokungaqiniseki okudalwe ngokujikeleze i-COVID-19 Delta eyahlukileyo. Silindele ukuba ukufika kuye kucothise ngoSeptemba nango-Okthobha ukuqala emva kwempelaveki yoSuku lwaBasebenzi. Ukufika kunokuntywila phakathi kwama-50 eepesenti ukuya kuma-70 epesenti yenqanaba lowama-2019, ”uqukumbele watsho uMcCartney.
Ukwazisa amaBhaso eMhlaba aMandla: Ukuqhubela phambili kweMozulu ...
Izicwangciso zokuhamba: Apho uGen Z, Millennials kunye noGen X bengqubana khona ...
Ukubuyisa kade kwi-Post-COVID yeNdawo yokuHamba koMoya
U-COVID ubulale Ekundo! Aloha kwingonyama yaseAfrika ...
IRashiya ifuna isiseko seenqanawa eSudan, iSudan ifuna imali
Ukuchulumancisa njengeRekhodi yaseSeychelles ngaphezulu kwe-100,000 ...
Umlawuli wezeMpilo waseYurophu: Musa ukuHamba ukuya eGrisi ...
I-33% yabantu baseMelika abangafumanekanga bathi abanakuze bafumane ...
Ezona zixeko zibalaseleyo zaseMelika zokusinda kwiZ Apocalypse yeZombie
Ummandla weAustralian Capital ungena kwi-COVID Lockdown epheleleyo
Ungajongana njani nabaThengi abanzima?